အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: January 2009
“ဌက်ကလေးတွေက ဘာကြောင့် ဖိနပ်မစီးသလည်း”
မောင်လူမွှေး က မောင်လူအေးကို မေးဖူးတယ်။
ကျနော် လမင်းဝေး က ဖေဖေ ဦးအောင်ဝေး က်ို မေးတယ်။
မှိန်တုတ်တုတ်ကြယ်တွေ က စကားမပြောကြပါဖူး။
စကားဘဲ ပြောတတ်တဲ့ ကြယ်..
တကဲ့ ကြယ်စင် အစစ်မဟုတ်ပါဖူး။
တော်လှန်ရေး သံစဉ်ဆိုတာ မညိမ့်ညောင်းပါဖူး။
အမေ့အိမ် မှာ ထမင်း နပ်မမှန်ပါဖူး။
အမေ ကဗျာဆရာ ကတော်..
ဆရာစော ကတော် လောက်မပြောင်ပါဖူး။
ကဗျာ ဆရာသား ကျနော်..
လူမွဲသား ကျောင်းမှာ အဖက်မလုပ်ချင်ကြဖူး။
သာသနာ့အရေး ထိတဲ့အခါ..
နှလုံးသားနဲ့ရင်းရေးရတဲ့ ကဗျာဆရာ
“ငါ.. ဘုန်းကြီးတန်းနောက် လိုက်တော့မယ်။
နိုင်ငံရေးသမား မယား ဆိုတာ..
မင်း ကြည့်သာ ရှာဖွေစား..မခင်ဦးစပါယ်။
သားရေ..အဖေ ခဏ အပြင်သွားမယ်။။
အဲဒီနေ့ က နောက်ဆုံးဘဲ..
မိသားစုနဲ့ အဝေး.. ဘယ်ရောက်နေတာပါလည်း။
ထမ်းပိုးမဲ့ .အဖေ့ ပုခုံးတွေပေါ်.
ကျနော် အပြစ်စင်စွာ ရယ်မောချင်သေးတယ်။
မြစ်ကမ်းနဖူးက လေပြေအေးတဲ့ အခါ..
အဖေပြောတဲ့ ကျနော့နံမည်နဲ့ကြယ်။။
ကောင်းကင် တနေရာမှာ ရှိချင်ရှိမယ်။
ကြယ် ဘ၀ လျှဉ်းလျှဉ်း မရောက်သေးတဲ့ ကြယ်..
တနေ့ တော့ ထွန်းပပါလိမ့် မယ်။
ယခု ထွန်းပနေတဲ့ ကြယ်..
ဒါ...အဖေ့ နံမည်နဲ့ ကြယ်..
ကျနော် တွေ့ တယ်…
ကြယ်တွေ က သမိုင်းကိုရေးတယ်။
အောင်ဝေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ကြယ်
အဖေ့အတွက် တမ်းတ ဂုဏ်ယူဆဲ..
ကျနော့ လက်ထက် လည်း .ဆက်ကြိုးစားမယ်။
တနေ့ မှာ ထွန်းလင်းပမဲ့ဇာနည်ကြယ်။
မသဒ္ဓါ ( ၁။ ၂၈။ ၂၀၀၈)
သေရိုးမရှိ.တဲ့ မျိုးချစ် အာဇာနည်...
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:38 AM0comments Links to this post
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ဆိုသည်..
စည်း ကလနားတွေ မရှိဖူး..
ကိုးကွယ်ရာ သာသာ အရေးမကြီးဖူး
ခန္ဓာချိူတဲ့ ၊ စိတ်ဘဲ နုံနဲ့ 
ခြေထောက် ပါပါ မပါပါ..
အသဲနှလုံးနဲ့ ထိတွေ့ တဲ့အကြင်နာ..
မြန်မာ သူငယ်ချင်း နှစ်ဦးအတွက်.
ဖမ်းချင် လည်း ဖမ်းပစေ
လုပ်နိုင်သမျှ အားလေးတွေ စုခြစ်
တရားသောအရာကို လှန့် နိူးခဲ့တဲ့ အဖြစ်.
ဖြူစင်သော မိတ်ဆွေကောင်းတို့ ၏ ဂုဏ်ရည်.
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:12 AM0comments Links to this post
မေ့ မရ အညာကိုလွမ်းတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်..
အရေးအဖတ် အတွက်ဆိုတဲ့ အ သုံးလုံး
ဝ ထ က လ သ.
အမေစိန် ကို မသဒ္ဓါ စာသင်ပေးခဲ့တာ..
မနေ့ တစ်နေ့ ကလိုပါဘဲ။
အမေစိန့်မြေးကလေး "နုထွေး"
သေစာ ရှင်စာလေးမှ မတတ်..
ပညာမရှိ နုံအ တောသား
လူပွဲစား က မစ တဲ့ အခါ
အမျိုးစောင့်ရှောက်တာ မြန်မာ တဲ့ နအဖ ညာဖြီးဆဲ
မဆလ ခေတ်ထက် ဆယ်ဆသာပေါ့.
တိုးတက်နေဆဲ AIDS ရောဂါ..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:52 AM0comments Links to this post
ဖောက်ထွက်မှုသည် ထွက်ပေါက်ဆီသို့ 
ထောင်ချောက်လို ပိတ်မိနေတဲ့ ဒို့ လူသားတွေ
ဒီိအတိုင်းဘဲ ငူတူတူ ထိုင်နေမလား..
ဒုတိ. အဆင့်က ရေရှာခြင်း
ဂူခေါင်မိုးက စမ်းကျနေတဲ့ ကျောက်စက်ရေ..
ဒါ ဒုတိယ ခြေလှမ်းလေ။
ထွက်ပေါက် ရှိအောင် ရှာဖွေ..
ယောက်ျားကောင်းတို့ ၏ ဂုဏ်ကျက်သရေ။
ဒို့ တတွေ ပင်ပန်းပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၆ နှစ်.
အားလုံး ပျံချီမ မှ
ချီမကြစမ်း ဒေါင်းအပေါင်းတို့ 
ပျံသန်းကြစမ်း ဒေါင်းအပေါင်းတို့ 
အလုံပိတ် ထွက်ပေါက်မဲ့တဲ့ လှိုဏ်ဂူအခန်း
လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဒို့ ကြိုးပမ်း။
ဘဘဦးဝင်းတင်၏ တန်ဖိုးမဖြတ်နိူင်သောအဆို အမိန့် အားကိုးကားပါသည်။
လူငယ်တွေအနေနဲ့ အနာဂတ်ကို ရင်ဆိုင်တဲ့အခါ ထွက်ပေါက်ထက် ပိုပြီးအရေးကြီးတာက ဖောက်ထွက်ဖို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်ထွက်ဖို့ကို စဉ်းစားကြပါ။ ဖောက်ကိုထွက်ရမယ့် အနာဂတ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ အဲဒီတော့ အမြဲတမ်း ထွက်ပေါက်ကို ချည်း စဉ်းစားမနေဘဲ ဖောက်ထွက်ဖို့ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။...
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:18 AM0comments Links to this post
မင်္ဂလာဆုတောင်း..နှစ် ၁၀၀ ပေါင်းဖို့ 
မြန်မာ့ ရိုးရာဓလေ့ မင်္ဂလာ
ရှေု့အိမ်..နောက်အိမ် ခုနှစ်အိမ်
နှစ်ဘက်သော မိဘအစုံနဲ့ 
မသဒ္ဓါတို့အဖိုး..
စာချူပ် မပါ။ ဘာမပါ
သူမဟာ အဖိုးရဲ့ ဇနီး
ဟန်ပြ ရွှေမှုန်ကြဲ အိမ်ထောင်များ
ဒါ တရားဝင်တဲ့ တရားမ၀င်အိမ်ထောင်ရေး
မောင်ငယ် ကိုခင်မောင်ဝင်း နဲ့
ပြည့်ဝတဲ့ နှလုံးသားရဲ့ အချစ်
နီးစပ်နေတာ ညီမလေးတို့ ရဲ့ ဂန္ဓ၀င်အချစ်..
" ဒီလင်နဲ့ ဒီမယား ကျမ်းမာ ရွှင်ပျော်
အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းကြရစေသောဝ်"
မသဒ္ဓါ ( ၁။၇။၂၀၀၉)
သစ္စာဟာ အိမ်ထောင် ရဲ့ လက်နက်..
(၁၀) နှစ်ဆိုတာ မကြာပါ
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီပေးနေရင်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ တောင်ဒဂုံ မြို့သား တဦးကို ယမန်နေ့က ဒဂုံတောင်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၁၀ ချမှတ်လိုက်သည်။
တောင်ဒဂုံတွင် နေထိုင်သူ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် ကိုခင်မောင်ဝင်းကို ယမန်နေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီခန့်က တရား မ၀င် အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်မှုတို့ဖြင့် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ချလိုက် ခြင်း ဖြစ်သည်။
"ကိုခင်မောင်ဝင်းကို အသင်းအဖွဲ့ပုဒ်မ ၅ နှစ်နဲ့ လ၀က (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး) ပုဒ်မနဲ့ ၅ နှစ်၊ ပေါင်း အလုပ်နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ချ လိုက်တယ်" ဟု အဆိုပါ အမှုနှင့် နီးစပ်သူ ရန်ကုန်မှ ရှေ့နေ ကိုညီညီလှိုင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
တရားရုံးမှ အင်းစိန်ထောင်သို့ ပြန်ခေါ်သွားရန် ထောင်ကားပေါ်သို့ တက်သည့်အခါ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်း သားများအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ရေးသားခဲ့သည့် 'ကျောင်းနံရံတ၀ိုက်မှာ ဒေါင်းအလံစိုက်မယ်' ဟူသည့် ကဗျာကို အော်ဟစ် ရွတ်ဆိုသွားခဲ့သည်ဟု မျက်မြင်များက ပြောပြကြသည်။
ကိုခင်မောင်ဝင်းသည် စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သည့် အဖွဲ့တခုဖြစ်သော မျိုးဆက်သစ် လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး ပြီး ခဲ့သည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့က လေဘေးဒုက္ခသည်များအား ကူညီနေစဉ် ဖမ်းဆီးခဲ့ရသည်။ မေလ ၂ ရက်နှင့် ၃ ရက်နေ့က တိုက်ခတ်သွားခဲ့သော နာဂစ် ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့် တသိန်းလေး သောင်း နီးပါး သေဆုံး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ကိုခင်မောင်ဝင်းသည် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပျောက်ဆုံးခဲ့၍ မြန်မာ နိုင်ငံတွင်းသို့ နယ်စပ်မှတဆင့် ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။
ကိုညီညီလှိုင်က "ပြောရမယ်ဆိုရင်ပတ်စ်ပို့ ပျောက်သွားတဲ့လူ တော်တော်များများကအောက်လမ်းကနေ ပြန်ဝင် လာတာပဲ။ ကိုခင်မောင်ဝင်းကျတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့အတွက် ဖြစ်တယ်" ဟု ပြောသည်။
တရားမျှတရေးအတွက် မျိုးဆက်သစ် လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လအတွင်းက ရန်ကုန်ရှိ လူငယ်အချို့နှင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အနီရောင်ကင်ပိန်း၊ ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် ကန့်ကွက်မဲ ထည့်ဝင်ရေး NO လှုပ်ရှားမှု တို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုလို ပြစ်ဒဏ် စီရင်ချက် ချသည့်နေ့မှာပင် အင်းစိန်ထောင်ဗူးဝ၌ နှစ်ဖက်မိဘများရှေ့မှောက်တွင်တောင်ဒဂုံ မြို့သူ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် မပန်းဖြူဖြူပွင့်နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးကာ လက်ထပ်ခဲ့သည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:53 AM0comments Links to this post
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ရဲ့ ဂျပန် ခရီးစဉ်
စွန့် စားဝံ့စား တော်လှန်ရေးသားကောင်းများ
အသဲထဲထိ ရင်းနှီူးရတဲ့ အာဇာနည်ဘွား။
ကျနော် ဗိုလ်ချုပ်ကို လေးစားတယ်။
အလံတိုင်ရှေ့ က မြန်မာ့အလံ
“ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ တကွ ကျဆုံးလေသော
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အား အလေးပြု”
ဦးညွှတ် ဂါရ၀ ပြု
“ နေမြဲ ” အသံ မကြားမချင်း မလှုပ်ရဲ
အခုတော့ အိမ်မက်တွေ အလား..
၁၉၉၃ ခုနှစ်က ကေအဲန်ယူအဖွဲ့တွေ
၃ ရက်ကြာ အချုပ်ကျ
၃ နှစ်ကြာ ခံဝန်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ဘဝ
၂၀၀၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့
ငယ်ဘ၀က လို ဗိုလ်ချုပ် ရဲ့ မွေးနေ့မို့ 
ကျုပ် တပည့်တွေ နဲ့ 
အပြစ်ရှာ ၃ နှစ် ထောင်ချထား
ဗိုလ်ချုပ်ကို လေးစားတဲ့အမှုတဲ့ ဗျာ။
၂၀၀၈ ၊ မေလ ၂၇ ရက်
၂၀၀၈ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်
အာဇာနည်နေ့ မရောက်ခင်က တကြိမ်၊
အလံထူ၍ စက်ဘီးစီးလို့ တကြိမ်
၂၀၀၈ အမျိုးသားနေ့ မှာ
မရေနိုင်တဲ့ ဖမ်းဆီးမှူများ အခါခါနဲ့ အကြိမ်ကြ်ိမ်။
'NO' နိုးအင်္ကျီ ၀တ်ဆင်မှု
မဲရုံ မှာ မဲလိမ်လည်မှုကို ကန့်ကွက်မှု
ဘာမှု ညာမှု။ အမြင်ကပ်တဲ့ အမှုများ
ယားတောင် တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်နဲ့ 
စွပ်စွဲနေ ကျုပ်ကို ရူးများနေသတဲ့..
စစ်ဗိုလ်များရဲ့ ရှေ့ ရေး။
၆၁ ကြိမ် မြောက်ပြီတဲ့ လွတ်လပ်ရေး
ရယ်စရာတွေ သိပ်မပြောကြပါနဲ့ 
ကျုပ်လက်တွေ မှာ နှောင်ကြိူးတွေ ရှိနေဆဲ
ကျုပ်ခြေထောက်များ သံခြေကျင်းတွေ ရှိနေဆဲ
ကြံဖွတ်တွေ အိမ်ပြင်က ရှောက်ပြန်သံပေးဆဲ။
ကလေးတွေ စာသင် သင်ပြန်ပြီ
ကျုပ်တို့မြန်မာပြည်သား
ခြောက်သွေ့ ငတ်မွတ် ကန္ထာရသား
ကျုပ်တို့ ဘဝ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ မနီး။
ဒီမှာ ကျုပ်ကို ကြည့်
ကျုပ်က ကလေးတွေ စာပြဆရာ ဦးအောင်ဖေ။
ကျုပ်ကလေးတွေ ကို အလိမ်တွေ မသင်ဖူး။
လျှာမြက်ပေါက်ပစေ။ ဖားတာတွေ မဆိုဖူး
တူတူ တွန်းမှသာ ရွေ့ မယ်။
မသဒ္ဓါ (၁။ ၆။၂၀၀၉)
ရန်ကုန်တိုင်း တွံတွေးမြို့တွင် ကျူရှင်ဆရာဦးအောင်ဖေ၏ မျိုးချစ်စိတ်နှင့် သတ္တိအားလေးစားစွာဂုဏ်ပြုပါသည်။ ဆရာ..ကျန်းမာပါစေ။ ဗိုလ်ချုပ်သီချင်းသံများ ကလေးများရဲ ရယ်မောသံများ။ ကျောင်းခေါင်းလောင်းသံများ တနေ့ မှာ လေ၌ တဖန်ပြန်လွင့်ပျံစေရပါစေ့မည် ဆရာ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:24 AM0comments Links to this post
အညှိတက်နေသော ရွှေရည်စိမ် လွတ်လပ်ရေး
ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက် ၁၉၄၈
မြန်မာ့ အလံ လေတလူလူလွင့်..
အလောင်းဘဝ အိမ်ပြန်လာတဲ့ ဦးသန့် ..
သေနေတာတောင် ဦးနေ၀င်းကလန့် .
အကိုကြီးတွေက လှန့် ခဲ့တဲ့ တပ်
၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ အောင်မြင်မှုတစ်ရပ်။
ကျမ ရဲ့ သက်တမ်း ၄၀ ကျော်..
ကိုလိုနီခေတ်မှာကံကောင်း လို့ လူမဖြစ်..
မဆလ..နအဖ လက်ထက် ကံဆိုးပြီးလူဖြစ်တယ်။
ခုထိတိုင် အမှောင်ထုထဲ မြန်မာပြည်မျက်နှာငယ်။
ကျွန်ခေတ်ထက်ဆိုးတဲ့ အဓမ္မ လုပ်အားပေး
ကျွန်ခေတ်ထက်ဆိုးတဲ့ ရွှေ့ ပြောင်းဒုက္ခသည်.
ကျွန်ခေတ်ထက်ဆိုးတဲ့ လိင်ညှင်းပမ်းခံ လူသားများ
ကျွန်ခေတ်ထက်ဆိုးတဲ့ မြန်မာ့ သတင်းမီဒီယာ
လွတ်လပ်မှုကို ဗိုလ်ချုပ်က ခြူပေး..
ဗိုလ်ချူပ် မရှိတဲ့အခါ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စစ်တပ်..
မြန်မာကို မြန်မာ အချင်းချင်းက သတ်တယ်။
ကိုလိုနီ ခေတ်က လွတ်မြောက်ပေမဲ့..
မြန်မာ ပြည်သူတွေ ထောင်ကျနေဆဲ
ကိုယ် လက် အသိဥာဏ်
ဝေးနေဆဲ စစ်မှန်သော လွတ်လပ်ရေးရယ်..
ဒို့ တတွေ ရှာလေလေ ဝေးတယ်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့ ရောက်တိုင်း အိမ်ရှေ့ အလံထူသော အဖိုးအားသတိရစွာဖြင့်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:12 AM0comments Links to this post
တော်လေးဝမိန်းမတွေ ရဲ့ နံမည်ကြား..
ကျမ ကေသီအောင် နံမည်..
ကျမချစ်တဲ့မောင် ကိုထွန်းထွန်း က
စီးလေတဲ့ ရေကို ဆည်ရတဲ့ကန်သင်း
ချစ်ဖို့ ဘဲနားလည်တဲ့ အိမ်သုသက်နှင်း။
နိူင်ငံရေးသတိ ရှိရှိ မရှိရှိ
နိူင်ငံရေး အသိ သိသိ မသိသိ
နိူင်ငံရေးဝါသနာ ပါပါ မပါပါ
“နင့်ယောက်ျား ဘယ်မှာလဲ” မေးတဲ့ အချိန်
" ကျမ မသိဖူး..
သိလည်း သေတောင် မပြောဖူး"
ကျမ လွယ်ထားတဲ့ သားသမီးရှေ့ရေး..
ကျမ ထက် ပိုအရေးပါတယ်။
ကျမ မှာ မောင့် သန္ဓေသားရှိတယ်။
ကျမ တို့ ရင်သွေးအနာဂတ်တွေ အတွက်
နိူင်အောင်သာ တိုက်လှဲ့ ။
တနေ့ ပြန်တွေ့ မှာပါ။
သေချာတယ် တနေ့ ပြန်တွေ့ မယ်။
ထောင်ဘယ်နှစ်နှစ်ဘဲ ကျကျ။
နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်..အနိုင်လူမဲ့ပွဲ
လွတ်လပ်တဲ့ အခါများမှ အမျှဝေ။
မသဒ္ဓါ ( ၁။၂။၂၀၀၉)
စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်. သစ္စာခိုင်သော ကိုထွန်းထွန်း၏ ဇနီးသည် မကေသီအောင် (သူမ၏ လင်ယောက်ျားအား မဖမ်း မိခြင်းကြောင့် ဓါးစာခံအဖြစ် ထောင် အနှစ် (၂၀ )ကျော် ကျခံလိုက်ရသော ကိုယ်ဝန် သုံးလဖြင့် ဇနီး သည်) အား ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အမရာ ကိန္နရီ..တော်လေးဝတွေ ထဲ ညီမငယ်လည်း ပါပါတယ်။ အားရ ဝမ်းမြောက်ပါ ညီမငယ်.။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:13 AM 1 comments Links to this post